ပှငျ့လငျး Menu ကို အနီးကပျ Menu ကို
ေလာ့ဂ္အင္ စာရင္းသြင္းရန္ Logout My Page Membership LiveChat
Book Now Restaurant Reservations My Reservations / ပယ်ဖျက်ရန်
LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား
login Form ကို
USER ID သို႔မဟုတ္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္
USER ID သို႔မဟုတ္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္ကို သိမ္းဆည္းရန္
ဆုချီးမြှင့်မှု အဖွဲ့ဝင် နံပါတ်နဲ့ ID ကို ရှာပါ စကားဝှက် ရှာရန်
USER ID ႏွင့္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္ လမ္းညႊန္
သင္၏ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ ကတ္နံပါတ္အား ရွာေတြ႔ႏိုင္မည့္ ေနရာ
သင္၏ USER ID သို႔မဟုတ္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္ကိုေမ့သြားပါက LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္ေမ့သြားသည္ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီး LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ နံပါတ္ ျပန္လည္ရယူျပီး ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ပါ။
သငျ့ရဲ့ USER ID ကို [My Page> စကားဝှက်အား တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ခြင်း] ရောကျရှိကွောငျးစာရငျးသှငျးခွငျး
ယာယီ စကားဝှက်-နှင့်ဆက်စပ်သော စုံစမ်းမေးမြန်းမှု။
ယာယီစကားဝွက္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္ေတာင္းခံထားသည္၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ အီးေမးလ္မွ မရရွိပါ။
ယာယီစကားဝွက္ အီးေမးလ္မ်ားကို LOTTE HOTELS မွ ပို႔ေပးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာလက္ခံရရွိမႈမွာ သင္၏ အီးေမးလ္အေကာင့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ပါသည္။
အီးေမးလ္ကို သင္လက္ခံမရရွိႏိုင္လွ်င္ သင့္အီးေမးလ္အေကာင့္၏ စပမ္း ဖ်က္ေမးလ္မူဝါဒေၾကာင့္ ယင္းကိုပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္သျဖင့့္၊ အီးေမးလ္က စပမ္းဖ်က္ေမးလ္ ဝင္ပံုးသို႔ေရာက္သြားႏိုင္သည္။
သင္၏ စပမ္းဖ်က္ေမးလ္ဝင္ပံုးကိုစစ္ေဆးပါ။သို႔မဟုတ္ သင့္အီးေမးလ္အေကာင့္ စီမံေရး ဝန္ေဆာင္မႈထံ ဆက္သြယ္ပါ။
ယာယီစကားဝွက္သံုးျပီး ေလာ့ဂ္အင္ဝင္၍ မရႏိုင္ျခင္း။
သင္၏ ယာယီစကားဝွက္သံုးျပီး ေလာ့ဂ္အင္ဝင္၍ မရႏိုင္ပါက ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
-ယာယီစကားဝွက္တြင္ အကၡရာႏွင့္နံပါတ္စာလံုးတို႔ ေရာေႏွာ ပါဝင္သည္။ ထူးျခား အမွတ္အသားစာလံုးမ်ားအပါအဝင္ ယင္းတို႔ကို မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
-ယာယီစကားဝွက္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုအထက္ပိုရရွိထားလွ်င္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ ယာယီစကားဝွက္ကိုသံုးျပီး ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ရမည္။
Q. အသုံးပြုရန်ဝင်ရောက်ခြင်း မအောင်မြင်ပါ။
သင် စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါသလား။ အရှေ့စားပွဲ၌ သင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စာရင်းမသွင်းခဲ့ပါက စကားဝှက်တစ်ခု သင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ( အွန်လိုင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်)။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စာရင်းသွင်းရန် သို ့သွားပါ။ ထို ့နောက် စာမျက်နှာ၏ ညာဘက်အောက်ခြေရှိ “အွန်လိုင်းအတည်ပြုခြင်း” အားနှိပ်ပါ (စကားဝှက်တစ်ခုပေးပါ)။
အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင်နံပါတ်၌ ဂဏန်း ၇ လုံးပါဝင်ပြီး အကယ်၍ ပထမ အက္ခရာမှာ စာလုံးဖြစ်ပါက စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးပါ။
အဖွဲ ့ဝင်ရန်စာရင်းပေးထားသောအမည်ကိုသုံး၍လျှောက်လွှာအား ဖြည့်ပါ။ နေရာလပ်တစ်ခုအား အက္ခရာတစ်လုံး ကဲ့သို့သတ်မှတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိထားပေးပါ။
Q. ကျွနု်ပ် အွန်လိုင်းအတည်ပြုမှုကို တောင်းခံခဲ့သည်။ သို ့သော် အီးမေးလ် တစ်စောင် မှ မရရှိသေးပါ။
အကယ်၍ သင်အီးမေးလ်မရရှိသေးပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်မလိုချင်သော စာများသိမ်းထားရာဖိုင်ကိုစစ်ဆေးပါ သို ့မဟုတ် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ မှန်မမှန် စစ်ဆေးပေးပါ။ သင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ မှားယွင်းနေပါက သင့်လိပ်စာအမှန်အား အထူးဦးစားပေးအဖွဲ ့ဝင်များအတွက် သီးသန့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို ့ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က လိပ်စာအား ပြန်လည် စိစစ်ပေးပါမည်။ အကယ်၍ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ မှန်ပါလျက် အီးမေးလ်တစ်စောင်မျှ မရရှိ သေးပါက အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင် များအတွက် သီးသန့်အီးမေးလ် လိပ်စာသို့အခြားအီးမေးလ်လိပ်စာ တစ်ခုကို ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်လိပ်စာအား ပြန်လည် ပြင်ဆင် ပေးပါမည်။
Q. ကျွနု်ပ်၏ အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင် အမှတ်ကို မသိပါ။
အထူးဦးစားပေးအဖွဲ ့ဝင်နံပါတ် ရှာဖွေရေး စာမျက်နှာပေါ်တွင် အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်း ပြီးနောက် သင် ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Q. ကျွန်ုပ်တွင် အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင် ထားမှုရှိသည်၊ သို ့သော် ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိသောကြာင့် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရန် ကျွနု်ပ် ဒုတိယအကြိမ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ရသည်။
အထူးဦးစားပေးအဖွဲ ့ဝင်အကောင့် တစ်ခုသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသာ သုံးနိုင်ပါသည်။
(စာလုံးအက္ခရာဖြင့်ရေးထားသော အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်လက်များဖြစ်သည့်) အဖွဲ ့ဝင် နံပါတ်နှင့် အဖွဲ ဝင်အချက်အလက် များကို အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံပို ့ပေးပါ။ အကောင့်များအား တွဲဖက် ပေါင်းစည်းရာ၌ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပါမည်။ အဆင်မပြေမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းပန်ပါသည်။
Q. ကျွနု်ပ်၏ ဝယ်သူ သတင်းအချက်အလက်များ မမှန်ကန်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုပြင်လို့ရမလား။
သင် အောက်ပါအတိုင်းသွား၍ သင့် အချက်အလက်များအားပြင်ဆင် နိုင်သည်။ ‘My Page > Edit Member Information’ ဤနေရာတွင် ပြင်ဆင်၍မရနိုင်သော (အိုင်ဒီ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသောအမည်၊ အီးမေးလ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်လိင်အမျိုးအစား) စသည့်သတင်းအချက်လက်များအား အထူးဦးစားပေးအဖွဲ ့ဝင်များအတွက် သီးသန့်အီးမေးလ်အကောင့်သို့ အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပေးပါ။
Q. ကျွန်ုပ်၏ အထူးဦးစားပေး အဖွဲ ့ဝင် အဆင့်နှင့် အမှတ်များကို မည်သည့်နေရာတွင် စစ်ရမည်နည်း။
သင်၏အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင်အဆင့်၊ စုဆောင်းထားသောအမှတ်များနှင့် အမှတ်များအားအသုံးပြုထားသော မှတ်တမ်းများကို Lotte Hotels ၏ မူလ စာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ‘My Page > My Membership Information’ တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Q., အဖွဲ ့ဝင် အဆင့်များအား မည်သို့သတ်မှတ်ထားသနည်း။
အဖွဲ ့ဝင်အဆင့်လေးမျိုးရှိပါသည်- ဂန္ဓဝင်၊ ငွေ၊ ရွှေ နှင့် ပလက်တီနမ်။ ပထမဆုံအကြိမ် အဖွဲ့ဝင်များကို အထူး အဖွဲ ့ဝင်အဆင့်ပေးပါသည်။
* ယခင်နှစ်၏ ဇန်နဝါရီလ 1 ရက် မှ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်အထိ တစ်နှစ်တာတစ်လျှောက် အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းများပေါ်တွင် အခြေခံကာ (ဟိုတယ်မှ ချက်ခ်အောက်ပြုလုပ်မှုပေါ်တွင် အခြေခံကာ) တစ်နှစ်စီ၏ ပထမဆုံးသော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အဆင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်မှုများ နှင့် ချိန်ညှိမှုများကို နှစ်စဉ် ဆောင်ရွက်သွားပေမည်။
Q. အဆင့်များအားမည်မျှကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။
အလားတူနှစ်၏ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက် ရောက်သည့်အထိ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်။
Q. အဖွဲ ့ဝင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့မှ တစ်နှစ်တာအတွင်း ၎င်း၌ နေထိုင်ခဲ့သော နေ့ အရေအတွက်၊ နေထိုင်ခဲ့သော အကြိမ် အရေအတွက် နှင့် အခန်းများအတွက် ပေးချေခဲ့သော ငွေပမာဏ အစရှိသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသော ပွိုင့်အမှတ်များပေါ်တွင် အခြေခံကာ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အား ဖော်ပြပါအတိုင်း တွက်ချက်ပါသည်။ ဤသည်ကို US ဒေါ်လာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထားပြီး၊ သင့်အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အား အောက်ပါအတိုင်း ချိန်ညှိပေးမည်။ ထည့်သွင်းရေတွက်နိုင်ရန် ကန့်သတ်ချက်အခြေအနေ သုံးခုမှ အနည်းဆုံး တစ်ခုဖြင့် ပြည့်မီကိုက်ညီမှု ရှိရပေမည်။
(သီးသန့်အဆင့်အတွက်နေထိုင်ရက် - ဝ ၊ တည်းခိုခဲ့သောည - ဝ ၊ အခန်းခ ပေးချေပမာဏ - ဝ / ငွေရောင် အဆင့်အတွက်နေထိုင်ရက် - ၃ ၊ တည်းခိုခဲ့သောည - ၇ ၊ အခန်းခ ပေးချေပမာဏ - ၂ဝဝဝ ဒေါ်လာ / ရွှေရောင်အဆင့်အတွက် နေထိုင်ရက် - ၁ဝ ၊ တည်းခိုခဲ့သောည - ၂၅ ၊ အခန်းခ ပေးချေပမာဏ - ရဝဝဝ ဒေါ်လာ / ပလက်တီနမ်အဆင့် အတွက် နေထိုင်ရက် - ၂ဝ ၊ တည်းခို ခဲ့သောညအရေအတွက် - ၅ဝ ၊ အခန်းခ ပေးချေပမာဏ - ၁၅ဝဝဝ ဒေါ်လာ)
Q. အဆင့်မြှင့်တင်မှုညှိနှိုင်းကာလမတိုင်မီ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်မြှင့်တင်မှု သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကျွန်ုပ်ကိုက်ညီ ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ကျွနု်ပ်၏အဆင့် မတိုးမြှင့်ခဲ့သနည်း။
Q. ကျွန်ုပ် ပလတ်စတစ်ကတ်တစ်ခု လိုပါသလား။ ကျွနု်ပ်၏ကတ်အား ကျွနု်ပ် နေရာ မှားထားခဲ့သည်။ ကျွန်ပ်ပြန်လည်ထုတ်လို ့ရနိုင်မလား။
Lotte Hotels ပင်မစာမျက်နှာသို့ သွားပါ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုတ် ဆွဲပါ။ ထို ့နောက် မိုဘိုင်းကတ်သုံးရန် log in ဝင်ရောက်ပေးပါ။ ကတ်ကိုသုံးရန်အတွက် မိုဘိုင်းကတ် ဓာတ်ပုံကိုလည်း သင်သိမ်း၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (Log in > My Account > Click Barcode > Save Card Image)
သင့်အဖွဲ ့ဝင်အချက်အလက်များအားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အမှတ်များကို အသုံးပြုနိုင်၍ ဟိုတယ်အား အသုံးပြုစဉ်အတွင်း ပလတ်စတစ် ကတ်အား သင်အသုံးပြုစရာမလိုပါ။
Q. ကျွနု်ပ်အမှတ်များသည် မည်မျှတန်သနည်း။
ပွိုင့်အမှတ် 100 သည် 1 USD ၏ တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည်။
Q. ဟိုတယ်မှာ ကျွန်ုပ် နေထိုင်သည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အမှတ်များ ရပါသလား။
စာရင်းနှုတ်ထွက်ခွာသည့်နေ့တွင် ပွိုင့်အမှတ်များအား ဆုချီးမြင့်သည်။
သို့သော်လည်း LOTTE City Hotel Kinshicho နှင့် တို့မှ ပေးချေမှု ပမာဏများအတွက်မူ စာရင်းနှုတ်ထွက်ခွာပြီးသည့်နောက်မှ အလုပ်ရက် 10 ရက် အတွင်းတွင် ပွိုင့်ရမှတ်များအား ဆုချီးမြင့်မည်။
Q. အမှတ်များကို မစုဆောင်းသော Lotte ဟိုတယ်များ ရှိပါသလား။
New York Palace ၊ Tashkent Palace ၊ Vladivostok ဟိုတယ် နှင့် များ၌ နေထိုင်မှုများသည် ယခုအချိန်တွင် အမှတ်များအား မစုဆောင်းပေးပါ၊ သို့သော် အနာဂတ်ကာလ၌ စုဆောင်းရန် အရည်အချင်းပြည့်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးသော တိုက်ခန်းများနှင့်နေထိုင်စရာများသည် အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုနှင့် မပေါင်းစည်းထားပါ။
Q. ကျွန်ုပ်ရရှိထားသောအမှတ်များကို ဘယ်မှာ စစ်လို ့ရနိုင်မည်နည်း။
LOTTE Hotels မူလစာမျက်နှာသို ့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းတွင် ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ‘My Page’ menu အောက်တွင် သင့်အမှတ် စုဆောင်းထားရှိမှုနှင့် အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းတို့ကို သင် စစ်ဆေးကြည့် နိုင်သည်
(ဟိုတယ်၌အဖွဲ ့ဝင်ဖြစ်ရန် သင် စာရင်း သွင်းထားပါက အွန်လိုင်းအတည် ပြုခြင်းကို သင်ပြီးမြောက်ရပါမည်၊ ထို့နောက် log in ဝင်ရန် စကားဝှက် တစ်ခုထားရှိပေးရမည်)။
ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်များပေးပို ့ချိန်တွင် ထိပ်ဆုံး၌ သင်၏အမှတ်စုဆောင်းရရှိမှု အခြေအနေအသေးစိတ်ကို ထည့်သွင်း ထားပါသည် (ကျွန်ပ်တို့၏ ပရိုမိုးရှင်း အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရယူရန် သဘောတူသော ဖောက်သည်များ ထံသာ ပေးပို့ပါသည်)။
Q. အထူးအခွင့်အရေးအမှတ်များကို စုဆောင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
အမှတ်များကို အဖွဲ ့ဝင်များကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေသော၊ ကြိုတင် မှာယူထားသောအခန်းများ အတွက်သာ စုဆောင်းပေးသလို ကြယ် ၅ ပွင့် အဆင့်ရှိ ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်များ၌ ကျသင့်သော အခန်းခများ (အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ခများ မပါ) အတွက်လည်း စုဆောင်း ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်မှုများတွက် သင်၏ အဖွဲ့ဝင်မှုအဆင့်အရ သင် အသုံးပြုသော ပမာဏ၏ 3-6% အား ရရှိမည်။
Q. ကျွန်ုပ် အမှတ်များစုဆောင်းနိုင်သည့် အများဆုံးအခန်းအရေအတွက်မှာ မည်မျှနည်း။
အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူသည် ဟိုတယ်တွင် နေထိုင်လျှင် ၎င်းတစ်နေ့တည်း၌ အခန်း သုံး ခန်းအထိ နေထိုင်မှုများအတွက် P ပွိုင့်ရမှတ်များအား ဆုကြေးချီးမြင့်မည်။ သို့သော်လည်း အခန်းများအား အဖွဲ့ဝင်၏ အမည်ဖြင့် ကြိုတင် မှာယူထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူသာလျှင် ၎င်းအခန်းများတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကာ အားလုံးသော အခန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် အပြည့်အဝအား အဖွဲ့ဝင်မှ ပေးချေရမည်။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူမှ အခန်းတစ်ခန်းအတွင်း နေထိုင်သော ရက်အရေအတွက်၊ အသုံးပြုသော အကြိမ် အရေအတွက် နှင့် အခန်းခပမာဏတို့သည် အဆင့်သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် P ပွိုင့်အမှတ်များသို့ သက်ရောက်မှုရှိပေသည်။
Q. စားသောက်ဆိုင် သို ့မဟုတ် အခမ်းအနားနေရာများ အသုံးပြုခြင်းမှ ကျွန်ုပ် အမှတ်များ ရနိုင်မလား။
ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်များ၌ကျသင့်သော အခန်းခနှုန်းထားများအတွက် ပေးချေသော အခန်းခပေးချေမှုများ အတွက် အမှတ်များအား သီးသန့် စုဆောင်းပေးပါမည်။ အခမ်းအနားပွဲများကျင်းပရာ နေရာများအသုံးပြုခြင်းအတွက် အမှတ်များ မစုဆောင်းပေးပါ။
Q. ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုပြီးနောက် ကျွန်ုပ် အမှတ်များရနိုင်မလား။
အဖွဲ ့ဝင် ဖြစ်ပြီးနောက် နေထိုင်မှုများ အတွက် တည်းခိုနေထိုင်စဉ်မှ ၆ လ အတွင်း အမှတ်များအားစုဆောင်း ပေးရန် သင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်ထားရန်အတွက် LOTTE Hotel မူလစာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းတွင် ရှိသော ‘My Page’ အောက်ရှိ ‘Point Inquiry’ သို့ သွားပါ။
Q. ကျွန်ုပ်၏အမှတ်အား အခြားအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးသို ့လွှဲပြောင်းလို့ရသလား။
အမှတ်များကို အဖွဲ ့ဝင်ထံသို့သာလျှင် ထုတ်ပေးပြီး အခြားအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦး ထံသို ့လွှဲပြောင်းပေးခြင်း သို ့မဟုတ် လဲလှယ်ခြင်းများမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ပေးအပ်ထားသော ပွိုင့်အမှတ်များအား လဲလှယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
Q. အထူးဦးစားပေးအဖွဲ့ဝင်အမှတ်များနှင့် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုမိုင်တို့ကို တစ်ချိန်တည်း၌ ရရှိနိုင်မလား။
အမှတ်များသည် လေကြောင်းခရီး သွားမိုင်များနှင့်အတူ ဆုချခြင်းမခံရ နိုင်ပါ။ (တစ်ခုခုကို ရွှေးချယ်ပါ။)
Q. အမှတ်များ၌ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်များ ရှိပါသလား။
အထူးရမှတ်များသည် ထုတ်ပေးသည့် နှစ် နောက်ပိုင်း သုံး နှစ်အထိ တရားဝင် ပါသည်။
ဥပမာ - ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အတွင်းတည်းခို နေထိုင်မှုများအတွက် ရရှိထားသော အမှတ်များသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်၌ သက်တမ်း ကုန်မည်ဖြစ်သည်။
Q. အမှတ်များအားမည်သည့်နေရာတွင် ကျွန်ုပ်သုံး၍ရနိုင်သနည်း။
ရရှိထားသောအမှတ်များကို အခန်းခ ပေးချေမှုများသာမက (နေထိုင်မှုများ နှင့်အခန်းပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းအပါအဝင်) စားသောက်ဆိုင်တွင် ကျသင့်ငွေ ပေးချေခြင်းများအတွက်လည်း အသုံးပြု နိုင်သည်။ သင့်မှာ အမှတ် ၁ဝဝဝဝ အထက် ရှိပါ က ထိုအမှတ်များအား ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ LOTTE အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ တွင် သင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
(သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် အွန်လိုင်း အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များမပါဝင်ပါ)။
Q. အရင်းအခြာမိသားစုဝင်များသည် အမှတ်များကို အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
အမှတ်များအား အဖွဲ ့ဝင်သာလျှင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်အမှတ်များကို အခြားတစ်ယောက် သို့ ပေးလိုလျှင် ‘My Page > Request Rewards eVoucher > Give as Gift’ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်ကို (နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် ပေါ်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) ထည့်ပြီး အသုံးပြုရန်အတွက် ပရင့်ထုတ်ပါ သို့မဟုတ် စခရင်ဖမ်းယူသိမ်းထားမှု ပြုပါ။
Q. ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တည်းရန် ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်များကို ကျွန်ုပ်အသုံးပြုလိုလျှင် ဟိုတယ်တစ်ခုအတွက် အမှတ် ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ။
၄။ ရမှတ်များကို အနည်းဆုံး အမှတ် ၁၀၀၀ (USD 10) မှစတင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Q. ကျွန်ုပ်သည် အကောက်ခွန်လွတ် ဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ကျွန်ုပ်၏အမှတ်များ အား အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ ့ဝင်ဖြစ်မှုအပေါ် အတည်မပြုပေးနိုင်ပါ။
LOTTE အကောက်ခွန်လွတ် စျေးဆိုင် များတွင် သင့်အမှတ်များအား အသုံးပြုချင်ပါက ဆိုင်သို့ အချက်အလက်များပေးအပ်ရန် သင် ခွင့်ပြုသဘောတူရမည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ ့ဝင် အမည်သည် သင်၏နို်င်ငံကူးလတ်မှတ် ပေါ်၌ရေးသားထားသောအမည်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
မူလစာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းပေါ်မှ ‘My Page’ အောက်တွင် သင့်အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရန် သင်သဘောတူနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော အမည်ကိုပြောင်းရန် အီးမေးလ်ဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
Q. ကျွန်ုပ် ဘယ်မှာဘောက်ချာတောင်းရ မလဲ။ ဘောက်ချာများကို ချက်ချင်းထုတ်ပေးသလား။
သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် သို ့မဟုတ် လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝ ဒေါ်လာ၊ ၅ဝ ဒေါ်လာ၊ ၁ဝဝ ဒေါ်လာတန်ဘောက်ချာ တောင်းခံရန် Lotte Hotel ၏ မူလ စာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းရှိ ‘My Page> Request Privilege Vocher’ သို့ အဆင့်ဆင့် သွားပါ။
တောင်းခံမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ဘောက်ချာအား ချက်ချင်း ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်အတွက် ဘောက်ချာအား ပရင့်ထုတ်ပါ သို ့မဟုတ် စခရင်အား ဖမ်းယူသိမ်းထားပါ။ (ဘောက်ချာအား သီးခြား ပို ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)
Q. ကျွန်ုပ်တောင်းထားသော ဘောက်ချာကို ပယ်ဖျက်ချင်ပါတယ်။
ထုတ်ပေးထားသောဘောက်ချာအား အသုံးပြုရန် သင့်ထံ၌ အစီအစဉ် မရှိပါက သင့်အမှတ်များပြန်ရရှိရန် အတွက် (ဘောက်ချာအား ရုတ်သိမ်းပါ) အမှတ်များအဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်တောင်းဆိုပါ (တောင်းဆိုမှုသက်တမ်း-ထုတ်ပေးစဉ်က အမှတ်များ၏ သက်တမ်းကာလအတိုင်း)။
Q. ဘောက်ချာများသည် ဘယ်လောက် ကြာကြာ တရားဝင်ပါသလဲ။
ဘောက်ချာများသည် ထုတ်ပေးသည့် နေ ့မှစ၍ တစ်နှစ်အထိတရားဝင်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် ကျော်လွန် သွားသော ဘောက်ချာများနှင့် အခမဲ့ နေထိုင်ခွင့်ဘောက်ချာများအားလုံး တန်ဖိုးသင့်မသုံးစွဲနိုင်ပါ။
Q. ကျွန်ုပ်သည် ဘောက်ချာပါပမာဏအောက်လျော့နည်းသည့်ပမာဏကိုသုံးချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျန်ရှိနေသောငွေပမာဏအတွက် ပြန်အမ်းငွေ ရနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုပြီးသည့်နောက် အထူးဦးစားပေးဘောက်ချာတစ်ခု ပေါ်မှ လက်ကျန်ပမာဏများကို ငွေပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပွိုင့်အမှှတ်များအဖြစ် ပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်ပေ။
Q. ကျွန်ုပ်သည် အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်၌ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ဘောက်ချာတစ်ခု ယူရပါသလား။
၅။ ရမှတ်များနှင့် ဘောက်ချာနှစ်ခုလုံးကို အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရမှတ်များကို LOTTE အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်တွင် အနည်းဆုံး အမှတ် ၁၀၀၀၀ (USD 100) မှစတင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမှတ်များကို အသုံးပြုချိန်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ၏ အမည်သည် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန် LOTTE HOTELS ဆုကြေးနံပါတ်ကို စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံမှထွက်ခွာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်အား ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပြီး ဖြစ်မှသာလျှင် ဘောက်ချာများကို (လက်ဆောင်များအဖြစ်) အသုံးပြုနိုင်သည် (E-CERTI ကိုရွေးချယ်ပြီး ဘားကုတ်နံပတ်ထည့်ကာ စစ်ဆေးနိုင်သည်)။
အခမဲ့ အခန်း ဘောက်ချာ
Q. ကျွန်ုပ်သည် PL အဆင့်ရှိ အခန်း ဘောက်ချာကို ဘယ်လို သုံးရမလဲ။
မူလစာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ဘောက်ချာ နံပါတ်အား စစ်ဆေးပြီးနောက် သင်ရွှေးချယ်ထားသောဟိုတယ်ကို ဖုန်းဖြင့်ကြိုတင်မှာကြားပါ (နံနက်စာ မပါ ၊ ပုံမှန်အခန်းအမျိုးအစားအတွက် တစ်ညတာဖြစ်သည် ) ။
*မူလစာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းမှ ကြိုတင်မှာကြား၍ မရနိုင်ပါ။
Q. PL အဆင့်ရှိ အခန်းဘောက်ချာ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်က ဘယ်တော့လဲ။
နှစ်တိုင်း ဇန်နဝါရီလအတွင်း အဆင့် ပြင်ဆင်ခြင်းကာလ၌ ပလက်တီနမ် အဆင့်ကိုရရှိသောအဖွဲ ့ဝင်များသို့သာ ဘောက်ချာများထုတ်ပေးပါသည်။ ဘောက်ချာများသည် နောက်တစ်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိ တရားဝင်ပါသည်။ ဘောက်ချာများသည် ၁၃ လ ကြာပြီး နောက် အလိုအလျောက်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းရှိ ရက်စွဲအား ထပ်မံတိုး၍မရပါ။
Q. ကျွန်ုပ်သည် PL အဆင့်အတွက် အထူးအခွင့်အရေးများထဲမှတစ်ခု အဖြစ် နောက်ကျမှထွက်ခွာခွင့်ကို မရရှိပါ။
ဟိုတယ်မှအခန်းမပေးနိုင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဟိုတယ်ကိုအကြောင်း ကြားပါ။ ထို ့နောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၁ဝ ရက် အတွင်း သင့်ကို ၁ဝဝဝ LH ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Q. ကျွန်ုပ်သည် အခန်းဘောက်ချာအား အသုံးမပြုရသေးပါ၊ သို့သော် ၎င်းမှာ ထည့်တွက်အသုံးပြုခံနေရပြီ ဖြစ်သည်။
ပလက်တီနမ်အဆင့်အဖွဲ ့ဝင်များသို့ အခမဲ့အခန်းဘောက်ချာများ ထုတ်ပေးသည့်အခါ အမှတ်တစ်မှတ် အနုတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
မူလစာမျက်နှာ သို ့မဟုတ် မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းပေါ်၌ နံပါတ် “-1” ဟု တွေ့ရှိပါက ထိုအရာသည် အနုတ်ခံ ရသောအမှတ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
Q. ကျွန်ုပ်သည် အဖွဲ ့ဝင်များအတွက််ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ်သောပစ္စည်းများနှင့် အထူးခံစားခွင့်များကိုလက်ခံရရှိလိုပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်း SMS သို ့မဟုတ် အီးမေးလ် ရယူရန် (သဘောတူခွင့်ပြုချက် လိုအပ်သည်) သဘောတူထားသော အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အထူးအဖွဲ့ဝင် လျှော့စျေး၊ လျှော့စျေးအကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အခမ်းအနားပွဲလမ်းသဘင်များကို SMS သို ့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ပို ့ပေးပါသည်။
သင် ပရိုမိုးရှင်းသတင်းများလက်ခံရန် သဘောတူညီမှုမရှိသေးပါက မူလ စာမျက်နှာသို ့သွားပါ။ ထို ့နောက် My Page > Edit Member Information အောက်တွင် “Consent to receive promotional information” အား စစ်ဆေးပါ။
Q. သင် အထူးဦးစားပေးအဆင့်အား ရယူသောအခါ အပိုဆောင်းလျှော့စျေး တစ်ရပ်ရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွဲ ့ဝင်များပို၍ အကျိုးအမြတ်ရှိစေနိုင်ရန် အသင့်လျော်ဆုံးသောနှုန်းထားများနှင့်ကမ်းလှမ်းသလို ဟိုတယ်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် အနည်းပါးဆုံးသောစျေးနှုန်း များ၊ အဖွဲ့ဝင်များသီးသန့် package deal များကိုလည်း ပေးအပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်မှုများအတွက် အခြေခံအမှတ်များပေးထားသည့်အပြင်အပိုဆုအမှတ်များကိုခွင့်ပြုသော ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်ပွဲများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းပေးအပ်ပါသည်။
Q. အထူးဦးစားပေးအဆင့်အတွက် ကျွန်ုပ် မည်သို ့စုံစမ်းမေးမြန်းရမည်နည်း သို့မဟုတ် အကြံဉာဏ်များပေးရ မည်နည်း။
အထူးအခွင့်အရေးဆုလာဘ်အစီအစဉ် များနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများမေးရန်အတွက်။
ကျေးဇူးပြု၍ 82-2-759-7671~5 သို့မဟုတ် privilege@lotte.net မှ တစ် ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
(အချိန်။ ။ ရုံးဖွင့်ရက် ဝ၉းဝဝ - ၁၈းဝဝ KST ကိုရီးယားစံတော်ချိန်၊ ရုံးပိတ်ရက်နှင့် အများပြည်သူ အားလပ်ရက်မှအပ)။
ရုံးပိတ်ရက်များနှင့် အများပြည်သူ အားလပ်ရက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ် ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖြေကြားရန် ကြိုးစားသွားပါမည်။
သငသြညြ join ခဲ့သလား
အွန်လိုင်းမှ စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထား ပြသခြင်းအားဖြင့် တူညီသော အွန်လိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်များကို သင်ရရှိနိုင်သည်။
အသင်းဝင် စစ်မှန်ကြောင်း ပြသမှု
အဖှဲ့ဝငျတစျဦးကို Join မဟုတျလော
ဆုများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်အမျိုးမျိုးရယူရန် ယနေ့ပင် ပါဝင်လိုက်ပါ။
LOTTE HOTELဆုခ်ီးျမွင့္မႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား
အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ၾကည့္ရန္ >
ေလာ့ဂ္အင္ စာရင္းသြင္းရန္ Logout My Page အပ်ပ် ဗားရှင်း
Voice of Customer Contact Us Ethics Reporting Careers
လိပ်စာ 30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea